လူတစ်ယောက် ရုတ်တရက် သတိလစ်သွားရင် ဘယ်လို ကူညီမလဲ - Hello Sayarwon
ရုတ်တရက် သတိလစ်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်း များစွာရှိပေမယ့် နှလုံးနဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ဖြစ်တဲ့ လေဖြတ်တာ၊ ရုတ်တရက် နှလုံးရပ်တာ ဒါမှမဟုတ် နှလုံးခုန်စည်းချက်မမှန်တာတွေနဲ့ အများဆုံး ဆက်စပ်မှု ရှိနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သွေးအားနည်းတာ၊သွေးတွင်း သကြားဓါတ်နည်းတာ ဒါမှမဟုတ် ရုတ်တရက် သွေးအမြောက်အများ ဆုံးရှုံးတာတွေကြောင့်လည်း ရုတ်တရက် သတိလစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
သတိလစ်မေ့မြောမှုကို ဖြစ်စေတဲ့ တခြား အကြောင်းရာတွေက ခန္ဓါကိုယ် အနေအထားကို ရုတ်တရက် ပြောင်းလိုက်တာ၊ အပြင်းအထန် နာကျင်တာ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများတာ၊ ရုတ်တရက် စိတ်လှုပ်ရှားတာ ဒါမှမဟုတ် အလွန်အမင်း ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်တာတို့ ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကာလအစောပိုင်းမှာလည်း ဒီလို ရုတ်တရက် မေ့လဲတာမျိုး ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒါမှမဟုတ် မြေကြီးပေါ် လဲမကျခင် မှီအောင်ဖမ်းလိုက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ သတိလစ်နေတဲ့သူကို ပက်လက်အနေအထားမှာ ထားပြီး သူတို့ရဲ့ ခေါင်းနေရာက နှလုံးရေပြင်ညီ မျက်နှာထက် နိမ့်နေပါစေ။ ပြီးရင် ဦးနှောက်ကို
သွေးကောင်းကောင်းရောက်စေဖို့အတွက် ခြေထောက်ကို သုံးဆယ်စင်တီမီတာလောက် အပေါ်ကို မြှောက်ထားပါ။ လျှာခေါက်ပြီး လေဝင်တဲ့ လမ်းကြောင်းတလျှောက် ပိတ်ဆို့မနေစေဖို့အတွက် သတိလစ်နေသူရဲ့ ခေါင်းကို ဘေးတစောင်းထားပေးပါ။ မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းကို စနိုးတာဝါလိုမျိုး နဲ့ ပွတ်ပေး၊သုတ်ပေးပါ။ ဒီအနေအထားမှာ ခန္ဓါကိုယ်အပူချိန်က အရမ်း အရေးပါတာမို့ သတိလစ်နေသူကို နွေးနွေးထွေးထွေးရှိပါစေ။ သတိပြန်လည်လာပြီးနောက်မှာလည်း တခါထပ်ပြီး သတိလစ်သွားမှာ စိုးတဲ့အတွက် မိနစ်အနည်းငယ်လောက် သေချာစောင့်ကြည့်ပေးပါ။ လူနာ အနားမှာ လူတွေဝိုင်းအုံမနေပါစေနဲ့။ လေကောင်းလေသန့်ကို တဝရှူရှိုက်ပါစေ။ လိုအပ်ရင် အရေးပေါ် လူနာတင်ကားကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ပါ။
သတိပြန်ရလာအောင် ရိုက်တာမျိုး၊အတင်းလှုပ်နိုးတာမျိုး ဘယ်တော့မှ မလုပ်ရပါဘူး။
သတိလစ်နေတဲ့သူကို အစာကျွေးတာ၊ရေတိုက်တာမျိုး မလုပ်ရပါဖူး။ တကယ်လို့ အဆာလွန်ပြီး (သွေးတွင်းသကြားဓါတ် အလွန်အကျွံ ကျဆင်းပြီး) သတိလစ်တာဆိုရင်တောင် လုံးဝပြန်ပြီး သတိလည်လာတော့မှ အစားအသောက်ကျွေးဖို့ ကြိုးစားရပါမယ်။
လှဲနေရာက ဒါမှမဟုတ် ထိုင်နေရာက ထရင် ဖြည်းဖြည်းချင်းထပါ။ ရုတ်တရက် ဆတ်ခနဲ မထပါနဲ့။
လည်ပင်းနားတဝိုက်မှာ အရမ်းကျပ်နေတဲ့ အဝတ်အစားမျိုးတွေကို မဝတ်ပါနဲ့။
ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားတဲ့ ဆေးတမျိုးမျိုးကို သုံးစွဲနေရပြီး သတိလစ်ချင်သလို ခံစားရတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို အမြန်ဆုံးအသိပေးပါ။
ရုတ်တရက် သတိလစ်ခြင်းဟာ သင့်ခန္ဓါကိုယ်မှာ ပြဿနာတခုခု ရှိနေကြောင်း အချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံ ဖြစ်သလို အန္တရာယ်များတဲ့ အခြေအနေတခုလည်း ဖြစ်တာမို့ ဒါကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကုသမလဲဆိုတာ သိထားဖို့ အင်မတန်ကို အရေးကြီးပါတယ်။
DIY: How to help someone who has fainted.
http://www.selfreliancecentral.com/2015/04/22/critical-info-how-to-help-someone-who-has-fainted/ Assessed January 5, 2017.
How to deal with fainting: 13 steps with pictures. http://www.wikihow.com/Deal-With-Fainting
Assessed January 5, 2017.